Kudhinda & Pigment
Denim Pulp Kudhaya uye Kushambidza
Special nokuti Pad värjäys pamwe Kuramba Machine
Chipimo chemushonga i1% -10%, wedzera machira anopararira ekushandisa
ne admin pane 21-09-29
1. Anti-acid, anti-alkali, yakaoma mvura kuramba, yakasimba mvura solubility; 2. Ine kupinza kwakanaka, kuenzanisa, kunyorova uye kupararira; 3. Dzivirira mhedzisiro yemaruva ane mavara, makwapa, maruva, nezvimwewo; 4. Ndiwedzere kumeso, akapararira uye adhesion pamusoro namatidza, namira, coatings ane ...
Chii chinonzi machira mafuta? Textile dhayi ruzivo
ne admin pane 21-09-25
Chii chinonzi machira mafuta? Kuziva kwemachira emachira. Textile madhayi madhayi anoshandiswa mukushambidza kwemachira. Iwo anonyanya kudyara michero yakadai semichero yemichero uye muto wemuti. Izvo zvakare zvine zvakasikwa zvemakemikari zvakaburitswa senge marasha tara. Yakakamurwa mumadhayi echisikigo uye ekugadzira dhayi, mazhinji acho ndeyekugadzira d ...
Nhanganyaya kurongwa uye hunhu hwevanyoro
ne admin pane 21-09-14
Softener iri mhando yemakemikari chinhu chinogona kuchinja iyo yakasimba uye ine simba kukakavara coefficient ye fiber. Inogona kushambadzirwa pamusoro peye textile fiber uye kuita kuti iyo fiber ishe, kuitira kuti uchinje ruoko rwekunzwa uye kuita kuti chigadzirwa chigadzikane. Kuti ndikupe zviri nani pasi ...
Ndechipi basa rekugadzirisa mumachira?
Kugadzirisa mumiririri kunogona kuvandudza kutsanya kwemuvara wedhayi pamucheka seye anobatsira mumiriri anoshandiswa pakurapa kunyorova. Inogona kuumba insoluble mavara mavara nedhayi pane jira kunatsiridza kusuka uye kudikitira kukasira kwemuvara, uye dzimwe nguva zvinogona zvakare kugadzirisa mwenje kutsanya. ...
Zvikamu zvitatu zvezvinhu zveantistatic
1. Antistatic mumiriri Iyo mashandiro eantistatic mumiriri kugadzira fomu remvura pamusoro pechigadzirwa kuburikidza ne adsorption kudzivirira kuumbwa uye kuunganidzwa kwemagetsi emagetsi. Naizvozvo, antistatic kuita kweantistatic mumiriri kunoenderana nekugona kweantistatic ag ...
Musiyano uripo pakati pefirimu nesilicone mafuta nemafuta akapfava
ne admin pane 21-08-23
Musiyano uripo pakati pefirimu uye silicone mafuta uye akapfava mafuta: 1. Silicone mafuta: Iyo yekutsvedza mhedzisiro yesilicone mafuta iri nani. Chinhu chikuru chinokanganisa ndechekuti inodhura uye inodhura, uye zviri nyore kukonzera mafuta anoyangarara kana achishandiswa. Mukupindura kudambudziko iri, ternary copolymer silicone oiri ine ente ...
Tora iwe kuti unzwisise uye uzive zvinonhuhwirira
Parizvino, vanhu vaongorora zvinokanganisa zvinhu, uye nesarufa-ine macompound, aldehydes, yakaderera mafuta acids, uye amine akasiyana siyana zvese zvinonzi zvinonhuwirira zvinhu. Akasiyana malodors ane akasiyana malodorous zvinhu, uye kune aya malodors, iwo anozivikanwa iwaya anobva pane relati ...
Basa hombe rekuenzanisa mumiriri
ne admin pane 21-08-05
Basa guru rekupfeka kushongedza uye kuchengetedza. Kana paine kuyerera uye kuyera kuremara, hazvingokanganisa chete chitarisiko, asi zvakare zvinokanganisa basa rekudzivirira. Semuenzaniso, kuumbwa kwe shrinkage maburi kunokonzera kukwana kwepende firimu ukobvu, uye kuumbwa kwepini ...
Ndeapi mashandiro uye nenguva inoenderana nehunyoro hwekutsvaira vamiririri
ne admin pane 21-07-27
DMA inokodzera iyo yakapfava kupedzisa yepamusoro-giredhi machira machira. Iyo inogona zvakare kushandiswa kune iyo hydrophilic uye yakapfava kupedzisa kwepolyester-donje, yakachena polyester machira, akagadzirwa nevanhu-fiber machira, akasiyana-siyana akarukwa machira uye akarukwa machira. Inogona kuita kuti jira rive rinogara-kwenguva uye kuwacha-kuramba ...
Maitiro Ekuvandudza Ruvara Kutsanya kwekugadzirisa Agent neDirect Dyeing
1. Madhayoni akajairika (N), senge girini yakasviba NB, brown brown NM, nezvimwewo madhayoni akajairwa asina kunanga pakutanga akashandisa benzidine semuviri wemusoro miviri, uyo wakarambidzwa izvozvi, uye ikozvino unoshandisa aniline semuviri wemusoro miviri pachinzvimbo. 2. Yakasanganiswa isina kunanga dhayi (D), haigone chete dhayi T / C, T / R uye imwe musanganiswa ...
ne admin pane 21-07-14
Ndeapi anowanzo shandiswa ekugadzirisa vamiririri?
ne admin pane 21-07-08
Ndeapi anowanzo shandiswa ekugadzirisa vamiririri? 1. Cationic quaternary ammonium salt 2. Cetylpyridine chloride, cetylpyridine bromide 3. Amine-formaldehyde resin mhando dicyandiamide-formaldehyde yekutanga shrinkage (inogadzirisa mumiriri Y, M) 4. Polyamine condensate (sirika inogadzirisa mumiririri LA) 5. Phenolic condensate ...